‘हेभी इक्वीप्मेन्ट भाडामा लगाउने व्यवस्था कुनै ऐनमै छैन’– अध्यक्ष विष्ट
हेभी इक्वीप्मेन्ट व्यवसायीलाई सापटी कोष र राहत कोष
| 2017-06-12 Published
निर्माण सञ्चार, काठमाडौं|| विकास निर्माणका मुख्य आधार नै हेभी इक्वीप्मेन्ट हुन् । प्रविधिको विकाससँगै आजभोली निर्माणका कार्यमा ठूला ठूला मेसीन तथा औजारको प्रयोग हुने गरेको छ । कामको प्रकृति हेरेर कतै डोजरको प्रयोग हुन्छन् त कतै रोलरको ।
जुनसुकै मेसिनको प्रयोग गरिए पनि ती औजारलाई हेभी इक्वीप्मेन्टमा राखिएको बताउँछन् हेभी इक्वीप्मेन्ट व्यवसायी संघ काठमाडौंका अध्यक्ष उत्तम विष्ट । उनै विष्टसँग हाल नेपालमा हेभी इक्वीप्मेन्टको अवस्था, काम गर्दाका चुनौती र काठमाडौं संघका भावी योजनाका बारेमा गरिएको कुराकानी –
हिजोआज संघ के कस्ता काममा व्यस्त छ ?
२० वर्षपछि सम्पन्न भएको पहिलो चरणको स्थानीय तहको चुनावमा हामी व्यवसायी पनि व्यस्त भयौं । चुनाव लगतै सस्ंथाको विकासका लागि अहिले हामी आन्तरिक योजना तयार गरिरहेका छौं । हेभी इक्वीप्मेन्ट क्षेत्रका व्यवसायीको हितका लागि हामीले सापटी कोष खडा गर्दै छौं ।
जसले तत्कालका लागि काठमाडौं संघ अन्तर्गत रहेर काम गरिरहेका तथा यस व्यवसायमा आवद्ध रहेका व्यवसायीलाई लक्षित गरिएको छ । यता हेभी इक्वीपमेन्ट व्यवसायीहरु राष्ट्र बैंकले अटो लोनमा गरेको कडाईका कारण मारमा छन् । अहिले हामी व्यवसायीलाई ऋण लिन साह्रै कठिन भएको छ ।
व्यवसायीको ऋणसम्बन्धी समस्याकोे निराकरण गर्न हामीले इन्भेष्टमेन्ट कम्पनी ल्याउने तयारी गरिरहेका छौं । यो कम्पनीले हाम्रा व्यवसायीलाई ऋण दिने तथा अन्य वित्तीय सेवामा सहयोगी भूमिका निर्वाह गर्नेछ ।
त्यस्तै काठमाडौं संघको नेतृत्वमा हामीले व्यवसायीलाई सहयोग हुने गरेर छिटै नै राहत कोषको व्यवस्था गर्दै छौं । यो राहत कोषले दैवी विपद्मा परेका व्यवसायी तथा अपरेटरका परिवारलाई सहयोग उपलब्ध गराउनेछ ।
हेभी इक्वीप्मेन्टको यस प्रकृतिको कारोबार गर्ने कति व्यवसायी साथीहरु हुनुहुन्छ ?
हालसम्म करिब ४०० को संख्यामा हामी संघमा आवद्ध साथीहरु छौं भने करिब १५० को संख्यामा हामी काठमाडौंमा नै छौं ।
हेभी इक्वीप्मेन्टका व्यवसायीले के कस्ता चुनौती सामना गर्दै आएका छन् ?
नेपालमा अझै पनि विकासका कामलाई प्राथमिकता दिनुपर्छ भन्ने भावनाको विकास गर्न सकिएको छैन । कहिले चन्दा आतंक व्यापक बन्छ त कहिले फिल्डमा नै काममा अवरोध आउने गर्दछ । त्यस्तै नीतिगत अस्पष्टता र समयमा नै कानुन परिमार्जन नभएका कारणले पनि काममा अवरोध पुर्याइरहेको हुन्छ । पछिल्लो घटना नै मैले तपाईंलाई जानकारी गराउँनु पर्दा करिब १ महिना अघि मात्रै पनि शिवम् सिमेन्टको चुनखानीमा कार्यरत ५ वटा एस्काभेटरमा अज्ञात समूहद्वारा आगजनी गरियो ।
त्यस्तै गुल्मीमा पनि अर्को एस्काभेटरमा आगजनी भएको जानकारी हामीले पाएका छौं । भने रौतहटमा पनि पछिल्लो समयमा स्काभेटरमा आगजनी भएको छ ।
यसरी विकास निर्माणमा प्रयोग गरिने औजार नै क्षतविक्षत् बनाउने प्रवुत्ति बढिरहने हो भने के हामी विकासको गतिमा अगाडि बढ्न सक्छौं त ? सम्पूर्ण पक्ष यी कुरामा जवाफदेही बन्न जरुरी छ । त्यस्तै अर्को चुनौती भनेको लाइसेन्स प्राप्त अपरेटर नेपालमा नहुनु नै हो ।
तपाईंहरुले हेभी इक्वीप्मेन्ट भाडामा लगाउँदै आउनु भएको छ । यसरी भाडामा लगाउने व्यवस्थामा कुन ऐन आकर्षित हुन्छ ?
दिनप्रति दिन हेभी इक्वीप्मेन्ट व्यवसायीहरु बढिरहेको अवस्था छ । आजको दिनमा विभिन्न जिल्लामा हाम्रा व्यवसायी साथीहरु कार्यरत हुनुहुन्छ । तर, कानुनी मापदण्डका विषयमा हाम्रो पेशाको प्रकृतिसँग मिल्ने गरेर काम गर्ने कुनै त्यस्तो प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने ऐन छ जस्तो मलाई लाग्दैन ।
केही हदसम्म हामीले निर्माण व्यवसायी ऐनलाई नै आधार मानेर अगाडि बढेका छौं तर हाम्रो क्षेत्रसँग सम्बन्धित भएर प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने ऐन कानुन आउन जरुरी छ ।
तपाईंले अपरेटरको विषय उठाउनु भयो । कस्तो छ नेपालमा अपरेटरको माग, उत्पादन र वर्तमान अवस्था ?
हेभी इक्वीप्मेन्ट व्यवसायमा अहिले सबैभन्दा बढी खड्किएको विषय भनेको नै अपरेटरको विषय हो । माग अनुसारको अपरेटरको उत्पादन हुन सकेको छैन । केही ट्रेनिङ सेन्टरले हेभी इक्वीप्मेन्टका अपरेटरको उत्पादन गरिरहेका छन् तर पनि माग अनुसार पूर्ति हुन सकेको छैन ।
त्यसमा पनि उत्पादित धेरै अपरेटर बैदेशिक रोजगारीमा जान्छन् भने केही मात्र नेपालमा रहन्छन् । नेपालमा लाइसेन्सको प्रक्रिया नै व्यवहारिक नभएकाले पनि धेरै नै समस्या देखिएको छ । हेभी इक्वीप्मेन्ट अपरेटरको लाइसेन्सको प्रक्रियाका लागि नै २ वर्षको साना गाडी चलाएको अनुभव मागिएको छ जसमा कुनै वैज्ञानिकता नै छैन । दिनप्रति दिन अपरेटरको माग बढिरहेको छ तर लाइसेन्स प्राप्त अपरेटरको कमीका कारण विकास निर्माणका काममा अवरोध आएको छ ।
यस्तो सम्मको परिस्थिति सिर्जना हुन लागिसक्यो कि निर्माण व्यवसायीले जुन हेभी इक्वीप्मेन्ट विक्रेता कम्पनीले नै लाइसेन्स प्राप्त अपरेटर उपलब्ध गराउँछ त्यही कम्पनीको नै हेभी इक्वीप्मेन्ट खरिद गनुपर्ने अवस्था पनि नआउँला भन्न सकिंदैन ।